NgoLwesihlanu oMnyama: Izibonelelo ezingcono kakhulu kwi-automation yasekhaya kunye nesandi | Iindaba zeGajethi
NgoLwesihlanu oMnyama: Izibonelelo ezingcono kakhulu kwi-automation yasekhaya kunye nesandi
El ULWESIHLANU omnyama Imalunga nekona, kwaye nangona le nto ibonakala ithatha ixesha elide, ngeli xesha besifuna ukuqhubela phambili ngokuhlanganiswa okunomdla. Njengonyaka, sijonga ngasemva kwaye sijonge izibonelelo kwezo mveliso sizamile kwaye sinokucebisa ngokunyaniseka okukhulu kwaye oku kube sisiphumo.
Ezi zezona zivumelwano zingcono zangoLwesihlanu oMnyama ngokwemigaqo ye-automation yasekhaya kunye nesandi, misela ikhaya lakho elihlakaniphile kwaye ngokuqinisekileyo wonwabele owona mculo ubalaseleyo. Ungabaphosi, kuba ixesha lifikile lokugcina imali encinci ngokuthenga into obuhlala uyifuna.
1 IAmazon Echo Bonisa i5-Ujongo lokuqala kwi-Alexa
2 I-Roborock S7-Isicoci seRobhothi egqibeleleyo
3 I-Jabra Elite 85t - Imveliso ejikelezayo
4 Iintlobo ngeentlobo zeemveliso zeSonos
5 IHuawei WiFi AX3-NgeWiFi 6 yokudlala kunye ne-automation yasekhaya
6 Ii-FreeBuds zazo zonke iintlobo kunye nemibala
7 Ezinye izinikezelo ezintle ongafanele uziphose
IAmazon Echo Bonisa i5-Ujongo lokuqala kwi-Alexa
IAmazon Echo Show yenye yezona ndlela zinomdla kakhulu phakathi kwezo zidibanisa isandi kunye ne-automation yasekhaya kwimveliso efanayo. Kule meko, sine-hardware yesandi se-Amazon Echo Dot ehamba nesikrini esincinci se-intshi ezintlanu, siqulunqa umzekelo ukuze sikwazi ukulawula izixhobo zethu ze-IoT, ukulawula i-YouTube okanye ukuhamba ngeSpotify ngendlela elula nelula, idlala ngokuthanda kwesi sixhobo.
IAmazon Echo Show 5 (2021) inexabiso eliqhelekileyo elingaphezulu kwe-89 yee-euro kwaye ngoku Kuphela zii-euro ezingama-44,99, esona saphulelo sibalulekileyo kwesinye sezona zixhobo zinomdla kunye nexabiso elifanelekileyo lemali iAmazon enalo kwikhathalogu yayo.Jonga kuphononongo lwethu kuba ungagqiba ngenye.
I-Roborock S7-Isicoci seRobhothi egqibeleleyo
IRoborock S7 entsha kraca lolona bhejo lunqwenelekayo kwi-brand ekwazile ukufumana i-niche ebalulekileyo kwimarike egcwele izicoci zerobhothi. Siyivavanye le modeli kwaye icoca kakuhle kakhulu, ayinangxaki yokusebenza kwaye ukuzimela kuphambene. Konke oku kukhatshwa luhlaziyo oluninzi lwesoftware kunye nokuba isikhululo saso esidumileyo sokulahla Okuzenzekelayo okuya kuvuyisa nayiphi na ivila yokucoca.
Okwangoku inesaphulelo se-150 euro, ngoko Ungayithenga nge-499,00 euro, isaphulelo esibalulekileyo apho ngokwembono yam yeyona igqwesileyo yerobhothi vacuum cleaner yonyaka ka-2021. Ungaphoswa kuhlalutyo lwethu, kuba kuyo unokufumanisa ukuba ixabiseke ngokwenene na.
I-Jabra Elite 85t - Imveliso ejikelezayo
Andikwazi ukuyilinganisa ngenye indlela, Ii-earphone ze-Jabra Elite 85t ziqhayisa ngeempawu eziphezulu apho kunye noluhlu oluphezulu. I-Jabra sele ifana nomgangatho kwaye kule, enye yeemveliso zayo ezilungileyo kwikhathalogu yonke, ayinakuba ngaphantsi. Sinokucima ingxolo esebenzayo, ibhetri ehlala ixesha elide kwaye konke oku kukhatshwa sesona sicelo sipheleleyo kwimarike ngale njongo.
Umgangatho wesandi ulunge kakhulu kwaye nangona uyilo lunobungozi ngandlel’ ithile, lenza umahluko kwinto ebalulekileyo, yonke into enxulumene nesandi. Banexabiso eliqhelekileyo le-228,99 euros, kodwa Nge 35% isaphulelo ungakwazi ukuthenga kubo kuphela 149,99 ngeli veki Black Friday kwiAmazon.
Iintlobo ngeentlobo zeemveliso zeSonos
Ukuba ujonge okona kulungileyo kumgangatho, ixabiso kunye noqhagamshelo, ngokungathandabuzekiyo yiSonos. Apha siye sahlalutya iimveliso zazo zonke iintlobo, kodwa ngeli xesha siza kugxila kwezo zinesaphulelo esikhulu, kunye ne-20% yesaphulelo sezixhobo ze-Sonos zisungulwe kubo bonke abasebenzisi abathatha isigqibo sokuthenga ngewebhusayithi yayo kunye nesaphulelo esikhulu kwi Sonos Uzulazula.
Kwelinye icala, into endiyithandayo kulo nyaka ibe ziiSonos Ubhedu isizukulwana sesibini, ibha yesandi esinamandla, epheleleyo kwaye ihamba kunye neDolby Atmos kunye nabancedisi abaphambili abanjengoMncedisi kaGoogle kunye ne-Amazon Alexa, ngaphandle kokulibala ukuhambelana kwayo ne-Apple HomeKit. Unesaphulelo esingaphezulu kwe-30% kwiAmazon ukuze uyithenge ngee-euro ezingama-369 kuphela.
IHuawei WiFi AX3-NgeWiFi 6 yokudlala kunye ne-automation yasekhaya
Kule mveliso sinokuyonwabela umgangatho WiFi 6 nge 802.11ax / ac / n / a 2x2 kunye 802.11ax / n / b / g 2x2 kunye MU-MIMO,akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi. Iprosesa eqhuba konke oku yi IGigaHome Quad-Core 1,4 GHz eya kuba noxanduva lokusasaza umqondiso ngobukrelekrele, kunye nokusivumela ukuba sonwabele amanqaku esicelo seHuawei sika-AI soBomi esiza kuthetha ngaso kamva. Ekuphela kwento eseleyo ukukhankanywa, nangona sele sithethile ngayo, kukuba sine-NFC kwisiseko sayo.
Isaphulelo kwiVenkile yeHuawei oko kukuvumela ukuba uyithenge kuphela ngee-euro ezingama-39,90 ngokuziswa kwangoko kwiivenkile zakho, okanye ukuba ukhetha ukuyithumela ekhaya malunga a 60% isaphulelo kwi Amazon apho unako kwakhona ukuyithenga 39,99 euro. Ngokunyaniseka, ukuba usenayo irutha yenkampani yakho, sele ithatha ixesha ukuya kuhlobo lwamva nje olukhoyo ngeWiFi 6.
Ii-FreeBuds zazo zonke iintlobo kunye nemibala
Ii-headphone ze-TWS, ngokucinywa kwengxolo, ezindlebeni, zemveli ... Uneentlobo ezininzi ezingapheliyo kuluhlu lweFreeBuds, ii-headphone zeHuawei kwaye sizame phantse zonke kwaye sicebisa oku kulandelayo ngokokuthanda kwakho kunye neemfuno:
I-FreeBuds Pro: Umgangatho womsindo ongenakulinganiswa, ukucinywa kwengxolo ephezulu kakhulu kwimarike kwaye ngexabiso elihle, unokuzithenga ngaphantsi kwe-99 kwinguqulelo yayo engwevu nakwinguqulelo yayo emhlophe. Inketho yeegourmets ezininzi.
IiBuds zasimahla 4: Ii-headsets ezingaphakathi-endlebeni ezinesandi esisebenzayo kodwa esingenamsindo wokurhoxiswa, inkqubo elungileyo yemakrofoni kunye neenkqubo ezikrelekrele zokulinganisa kwabona bakhululekileyo abakhetha ukusebenza imini yonke kunye nabo, I-euro ezingama-109 kuphela.
FreeBuds 4i: Ukuthenga okuhlakaniphileyo, ngokucinywa kwengxolo, ukuzimela okukhulu, intuthuzelo kwaye ngaphezu kwayo yonke into eguquguqukayo ngexabiso elifanelekileyo, kuphela ii-euro ezingama-49.
Ezinye izinikezelo ezintle ongafanele uziphose
Iphupha T20: Isicoci sevacuum esinamandla, esiguquguqukayo esinezixhobo ezininzi, umthamo omkhulu wokufunxa uhamba kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokucoca okunzulu kwemihla ngemihla, ngaphandle kwamathandabuzo ukuma kwezinye iindlela zeDyson, kuphela 254 euro kwi Amazon.
IAmazon Fire Stick Max: Ukuba sifundela ukuthenga intonga yeTV eqhelekileyo kuba asifuni ngaphezulu komxholo we-Full HD, umahluko uyamangalisa. Ngoku nge-WiFi 6 kunye neDolby Atmos ehambelana nawo onke amandla kunye nokucokisa rhoqo, ixabiso laugh of kuphela 38,99 euro (40% isaphulelo).
IGen yesine yeAmazon Echo: IAmazon Echo lukhetho lokuqala olwenza ukuba iAmazon ifumaneke kuwe ukuba ufuna ukuqala ikhaya elidityanisiweyo ngeZigbee ngaphandle kokuncama umgangatho wesandi ekuvumela ukuba umamele umculo. Nangona kuyinyani ukuba ibonelela ngexabiso eliphezulu, kodwa ikhulile ngokuthelekiswa nemodeli yangaphambili, sinesizukulwana sesine iAmazon Echo Dot ukusuka kwi- € 59,99 (ZITHENGA).
Ngendlela efanayo, unokudlula kwicandelo lethu lophononongo apho uya kufumana iimveliso esizihlalutyileyo unyaka wonke kwaye ngaphandle kwamathandabuzo zinokubonakala ngathi yindlela enomdla kakhulu ngoku amaxabiso athotyiweyo ngolwesihlanu olumnyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » NgoLwesihlanu oMnyama: Izibonelelo ezingcono kakhulu kwi-automation yasekhaya kunye nesandi
NgoLwesihlanu oMnyama: Eyona ilungileyo kwimultimedia, izixhobo kunye nezinto ezinxitywayo
I-Dreame T20, umgangatho ophezulu kunye nomsebenzi wokucoca ukucoca ngesandla [Uhlalutyo]